UVanessa, amagumbi aRentwayo
Igumbi lakho lokulala e indlu engasemva sinombuki zindwendwe onguNorge
Iindawo ezinomdla: iindawo zokutyela kunye nokutya, ubomi basebusuku kunye nemisebenzi yosapho. Uya kusithanda indawo yam ngenxa yendawo, abantu kunye nomoya. Indawo yam yokuhlala ilungile kumaqabane, abahambi ngezoshishino, iintsapho (kunye nabantwana) kunye namaqela amakhulu.
Endlini kuqeshwa igumbi langaphakathi, eliquka igumbi lokuhlambela kunye nekhitshi elincinci, eline-TV, ifriji, i-air conditioning, amanzi ashushu nabandayo. Ukongeza, igumbi elizimeleyo elibanzi, elineempawu ezifanayo. abathengi banokufikelela kwiindawo ezahlukeneyo zendlu, iinkonzo zesidlo sakusasa, ulawulo lweeteksi kunye ne-WiFi ziyanikezelwa. Indlu ikwindawo ezolileyo ekufutshane kakhulu nombindi wesixeko.
Yindawo esembindini kodwa kwangaxeshanye izolile, kufutshane nesikhululo sebhasi, iihotele, iivenkile, iidisco, iindawo zokutyela. Indawo ehlala kuyo intle kakhulu kuba icoceke kakhulu, ingqongwe ngabantu abalungileyo.
Umbuki zindwendwe ngu- Norge
(+53) 52463516 Alina
(+53) 54057670 Claudia